असल संस्कार, असल नागरिक- विविधा - कान्तिपुर समाचार
असल संस्कार, असल नागरिक
चैत्र २, २०७५ झमक घिमिरे
काठमाडौँ — हाम्रो संस्कारगत सोच चिन्तनमा छोरीले कमाएको, गरेको आर्जनमा बाबुआमा बाँच्न हुँदैन, अर्को जुनीमा त्यो भार तिर्नुपर्छ अर्थात् चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत सोच, चिन्तन बोकेका मानिसहरू अहिले पनि समाजमा धेरै भेटिन्छन् । आखिर उस्तै पीडा, उस्तै दर्द खेपेर हुर्काएका, बढाएका हुन्छन्, बाबुआमाले । उस्तै त्याग, समर्पण हुन्छ भने किन छोरीहरूको आर्जनमा बाँच्न नहुने बाबुआमाहरू ?
यो पंक्तिकारको दिमागमा यो प्रश्न ठिंग्ग उभिन्छ । यो संस्कारगत परम्परा विरुद्ध यही पंक्तिकारले निकै पहिला नै धावा व्यवहारले बोलिसकेकी छे । अहिलेको समयमा छोराहरूको मात्र आय आर्जनमा बाँच्छु भन्ने अभिभावकहरूको सोच, चिन्तनमा विस्तारै परिवर्तन आउँदैछ ।
यो सकारात्मक पक्ष हो । अहिले वंश धान्ने र अंश खाने छोरै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको कानुनी रूपमै अन्त्य भएको अवस्था छ । अहिलेको नीति–नियम अनुसार छोराजतिकै छोरीले पनि समान हिस्सा अर्थात समान अंशियार बन्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि छोराकै मोहले अझै मान्छेलाई छोडेको छैन । सन्तान होइन, दुनियाँलाई छोरा चाहिन्छ । अधिकांश मान्छेले छोरी होइन, छोरा जन्माउन चाहन्छन् । किनभने छोरा भए सधैं आफूसँगै रहन्छ, बुढेसकालको सहाराका रूपमा हाम्रो समाजले परिभाषित गरेको छ । त्यही मानसिकताले ग्रस्त छ, यहाँको समाज । यो मानसिकता यहाँमात्र होइन, संसारभरि कुनै न कुनै रूपमा जीवित छ ।
अहिले पनि महिलाहरू जति शिक्षित हुन्, अधिकांश पुरुषको कठपुतलीको रूपमा सञ्चालित छन् । यहाँसम्म कि आफूलाई मनपर्ने खानेकुरा पनि श्रीमानको आदेशविना किन्न सक्दैनन् । महिला आफ्नो खुसी र इच्छामा चल्न कमैले पाउँछन् । आफ्नो शारीरमाथि पनि आफ्नो खुसी हुँदैन, पुरुष या श्रीमानकै खुसीमा चल्छ । हुन त यसप्रति सचेत महिला छँदैछैनन् भन्ने होइन ।
तर अधिकांश महिलाको स्वतन्त्रता भनेको पुरुषको दायराभित्र खुम्चिएर रहेको छ । त्यसैले पनि उहिलेका धूर्त पुरुषहरूले महिलाको स्वतन्त्रताप्रति धावा बोलेर आफ्नो इच्छामा चल्ने मानव मिसिनको रूपमा परिणत गरे । यिनीहरूले महिलालाई सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले तल्लो दर्जामा पुर्‍याए ।
छोरीहरूले आफ्नो जन्म र कर्म दिने बाबुआमाहरूको अन्तिम संस्कार गर्न नहुने संस्कार बनाए । छोरीहरूले बाबुआमाहरूको काजकिरिया गरे दिवंगत आत्माले शान्ति पाउँदैन, परलोकमा पनि उनीहरूले शान्ति पाउँदैनन् भन्ने संस्कार, चिन्तन बनाइदिए । यस्तो सोच, चिन्तन विरुद्ध आज निकै छोरीहरूले धावा बोल्नुमात्र होइन, आफ्ना बाबुआमाको अन्तिम संस्कार गरेका छन् ।
डा. उपेन्द्र देवकोटाका छोरीहरूले आफ्ना दिवंगत पिताको लासलाई काँधमात्र हालेनन्, आफ्ना पिताको लासमाथि दागबत्ती दिए, काजकिरिया पनि गरे । अन्तिम कर्म पनि गरे । के डा. देवकोटाले शान्ति पाएनन् ? यी बाबुआमाको अन्तिम संस्कार छोराले नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेकाहरूलाई प्रश्न छ, के छोरा नहुने सबै मरेर नर्क गएका छन् ?
त्यसो त हालै निधन भएका नेता भारतमोहन अधिकारीका छोरीहरूले पनि आफ्ना पिताको अन्तिम संस्कार गरे । उनीहरूले आफू सन्तान हुनुको जिम्मेवारीमात्र पूरा गरेनन्, आफ्ना बाबुआमाप्रति सबै भूमिका पूरा गरेका छन् । बाबुआमाहरूको लागि छोरा नै जन्माउनुपर्छ, हेरचाहकोलागि सधैं आफ्नै वरिपरि बस्छन् भन्ने मान्यतामा परिवर्तन आउँदैछ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो ।
अहिलेका छोरीहरूमा जे गर्न पनि तयार छु भन्ने धारणाको विकास हुनु जरुरी छ ।
बाबुआमाहरूमा पनि छोरो भनेको त कुलको दीपक हो, नभई त कहाँ हुन्छ भन्ने भावनामा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । किनभने अब समाज र समयमा असल सन्तानको जरुरत छ । छोरा होस् या छोरी सानैदेखि विना भेदभाव असल संस्कार र शिक्षा दिएर हुर्काउन सक्यो भने उसले परिवारको जिम्मेवारीमात्र होइन, राष्ट्रकै जिम्मेवारी बोक्न सक्छ ।
प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ ०७:५९